Monday August 29, 2016 - 10:20:48 in Xiriirka Kubadda Gacanta by Nocsom Editor
Tartanka oo ay ka qeybgalayeen Wadamaada Soonka Shanaad ee Bariga Afrika oo kala ah Soomaliya Djabouti ,Ethiopia iyo Sudan ayaa bilowday 23 Bishan agoosto waxaana lasoo gebagabeeyay 26 bishan.
Wiilasha Soomaaliya ayaamar kale guul ka gaaray Sudan kulanka loogu tartamayay Billadda Marta ee tartanka, waxayna sidaa ku xaqiijiyeenkaalinta saddexaad iyo Billaada maarta, halka kaalinta koowaad ay heshay Ethiopia Biladda Dahabka , Qalinka ay ku guuleysteen Wiilasha Djabouti. Afaraadna ay ku dhammeysteen.
Dhanka Xulka Gabdhahawaxay guul ka heleen Sudan laba jeer halka ay guuladaro kala kulmeen Djabouti iyo Ethiopia, waxaana tartanka dhanka Gabdhaha kaalinta koowad galay Ethiopia, labaad Djabouti ,Saddexaad Soomaaliya, kaalinta afaraadna ay xaadireen Gabdhaha Sudan.
Guddoomiyaha Xiriirka kubadda Gacanta Soomaaliya Maxamed Xuurshe Xasan Eenoow ayaa mahad celin balaaranusoo jeediyay Safaarada Soomaaliya ee Djabouti oo garab taagneyd inta uu tartanka socday Xiriirka kubadda gacanta Djabouti iyo Dowladda Djabouti oo soo Dhaweyn iyo walaaltinimo u muujiyay inta uu tartanka socday.